အနာဂတ်၏ဖက်ရှင်- NFTs နှင့် Metaverse • musanews
စွမ်းအားသည် စာနာမှုကို သက်သာစေသော ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုကို ဖြစ်စေသည်။
ပင်မစာမျက်နှာ အသိုင်းအဝိုင်းခံစားပါ အနာဂတ်၏ဖက်ရှင်- NFTs နှင့် Metaverse အကြား
နိုဝင်ဘာ 18, 2021
Virtual reality နှင့် metaverse တို့သည် ပိုများလာနေသော အကြောင်းအရာများဖြစ်သည်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို အတိအကျလက်ခံရန် ပြင်ဆင်နေသည့်ကမ္ဘာတွင်၊ ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းသည် virtual အဝတ်အစားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အနာဂတ်ကို ရှာဖွေနေပါသည်။
မရှိသောအ၀တ်အထည်များကို သင်ဝယ်ဖူးပါသလား။ ပြီးတော့ အဲဒါအတွက် သင် ဘယ်လောက် ကျေကျေနပ်နပ် ပေးမလဲ။
စက်မှုလုပ်ငန်း virtual ဖက်ရှင် (ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖက်ရှင်ဟုလည်းခေါ်သည်) သည် ဖက်ရှင်တွင်အစစ်အမှန်နှင့်မဟုတ်သောအရာကို ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အား ရှုပ်ထွေးစေကာ ယူရိုသန်းပေါင်းသန်းပေါင်းများစွာရောင်းချမှုကို မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ အရ Gucciပင်မဖက်ရှင်အိမ်များကမ္ဘာသို့မဝင်ရောက်မီအချိန်၏ "အချိန်တစ်ခုသာ" ဖြစ်သည်။ NFT(non-fungible တိုကင်များ) နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖက်ရှင်၏ အခြားရှုထောင့်များ။ ဖက်ရှင်လသည် အောက်တိုဘာလတွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပြီး၊ အမှတ်တံဆိပ်အများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ စုဆောင်းမှုများတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်အဝတ်အစားများ ယူဆောင်လာရန် NFTs နှင့် အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အကြောင်းကတော့ ဖက်ရှင်တောင်မှ အသွင်ကူးပြောင်းရေး အတွက် ပြင်ဆင်နေတာကြောင့်ပါ။
metaverse ၏ သဘောတရားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခေတ်စားနေသော အကြီးမားဆုံး အကြောင်းအရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ နည်းပညာအထူးသဖြင့် ဘယ်အချိန်ကတည်းကလဲ။ Facebook က သူ့အမြင်ကို အပြည့်အ၀လက်ခံပြီး ကုမ္ပဏီနာမည်ကို ပြောင်းဖို့အထိ သွားခဲ့တယ်။ meta.
သူ့အလိုလို၊ ဖောက်ပြန်သော ယေဘုယျအားဖြင့် လူအများဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သည့် မျှဝေထားသော virtual ပတ်၀န်းကျင်ကို ရည်ညွှန်းသည့် ကျယ်ပြန့်သောအသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်တာနက် မည်သည်ကို၎င်း ကိုယ်စားပြုသည် 3d ကိုယ်ပွား.
ယနေ့အထိ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အွန်လိုင်းသို့ သွားခြင်းဖြင့် အပြန်အလှန် ဖလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ကွန်ရက်စာမျက်နှာများ သို့မဟုတ် ဆိုရှယ်မီဒီယာ နှင့် အက်ပ်များမှတဆင့် ၊ metaverse ၏ အယူအဆတွင် အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှုများစွာ ပါဝင်ပါသည်။ ဘက်ပေါင်းစုံသုံးစွဲသူများ တတ်နိုင်သည့်နေရာ၊ ငုပ်ရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာကို မြင်ရုံနဲ့တင် မဟုတ်ပါဘူး။
Mark Zuckerberg တင်ပြသည့်အတိုင်း အတွင်းတွင် လူများသည် တွေ့ဆုံ၊ အလုပ်နှင့် ကစားနိုင်သည်။ နားကြပ်များ၊ မျက်မှန်များအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ၎င်းသည် အမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ လုပ်ခဲ့ပြီးအဖြစ်မှန်, အက်ပ် စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် အခြားစက်ပစ္စည်းများ။
အွန်လိုင်းတွင် ရရှိနိုင်သော အလားအလာရှိသော လှုပ်ရှားမှုများသည် တစ်ကယ့်ကို ကြည့်ရှုခြင်းကဲ့သို့ ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဖျော်ဖြေပွဲအွန်လိုင်းမှ ခရီးထွက်ပါ၊ ဝယ်ပြီး စမ်းကြည့်ပါ။ vestiti ဒစ်ဂျစ်တယ်. metaverse အတွင်းတွင်၊ အသုံးပြုသူများသည် cryptocurrencies ကိုအသုံးပြု၍ virtual land နှင့် အခြားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဖက်ရှင်သည် ဖောက်သည်များ၏ အသွင်အပြင်တွင် ပို၍ အမြစ်တွယ်လာလိမ့်မည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း Zaက အချိန်ပိုကြာမယ်။ အွန်လိုင်းကစားပါ။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီး ဈေးဝယ်ထွက်ပါ။
virtual reality ဖြစ်သော်ငြားလည်း လူများသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပွားရုပ်ပုံများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လိုချင်ကြလိမ့်မည်။ NFTs များ၏ ကျေးဇူး၊ အတွေ့အကြုံ metaverse လူတွေကို သူတို့ဝယ်တဲ့ ဖက်ရှင်နဲ့ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေကို စစ်မှန်တဲ့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့ virtual world ထဲမှာတောင် ဖက်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းမှာ အပြည့်အဝ နှစ်မြှုပ်နိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ NFTs များသည် ခြေရာခံနိုင်သည့်အပြင် ထူးခြားသောကြောင့်၊ ဖက်ရှင်ပစ္စည်းအတုများ၏ ပြဿနာသည် အတိတ်ဖြစ်လိမ့်မည်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းတိုင်းကို စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်သဖြင့်၊ blockchain.
Virtual Reality သည် ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ စီးဆင်းမှုအသစ် ဝင်ငွေ-
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကိုသာ ရောင်းချမည့်အစား ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ၎င်းတို့၏ virtual ပစ္စည်းများနှင့် အဝတ်အစားများကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော စျေးကွက်တွင် ရောင်းချခြင်းဖြင့် ငွေရှာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာ အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နီးစပ်မှုမရှိဘဲ ပါဝင်နိုင်မည့် ဖက်ရှင်ဝါသနာရှင်များ အစုအဝေးကြီးသို့ ရောက်ရှိနိုင်ခြေဖြစ်သည်။
metaverse ရှိ အမှတ်တံဆိပ်များမှ ဘာကိုမျှော်လင့်ရမလဲ
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ဖက်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစျေးကွက်၏လမ်းဆုံကို အာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာကာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖက်ရှင်အတွက် မတူညီသောချဉ်းကပ်မှုနှစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်-
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပေါင်းစပ်ထားသည်- ၎င်းသည် augmented သို့မဟုတ် virtual reality ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်လူတစ်ဦးဝတ်ဆင်နိုင်သောဒစ်ဂျစ်တယ်ဖက်ရှင်ဖြစ်သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ် အပြည့်အစုံ- ၎င်းသည် ကိုယ်ပွားတစ်ခုသို့ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖက်ရှင်ဖြစ်သည်။
ဤဦးတည်ချက်တွင် စံနမူနာပြတစ်ခုမှာ အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ Balenciaga နှင့် Fortnite သည် ဂိမ်းအတွင်း Balenciaga ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် မှုတ်သွင်းထားသော အဝတ်အထည်များ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ကို ဝယ်ယူနိုင်စေခဲ့သည်။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဂိမ်းကစားခြင်း ၎င်းသည် သင့်ဒီဇိုင်နာများ၏ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို စမ်းသပ်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခုမျှသာမကဘဲ၊ အမှတ်တံဆိပ်များကို မျိုးဆက် Z နှင့် ပိုမိုနီးစပ်စေရန် ကူညီပေးသည့် ကြီးမားသောစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကို ကိုယ်စားပြုသောကြောင့်၊ အဆိုပါ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းအများစုသည် အမှန်တကယ်အားဖြင့် ဝယ်ယူသူများကို ၎င်းတို့လက်လှမ်းမီနိုင်သည့်အခွင့်အရေးကို ပေးဆောင်သည်။ ဂိမ်းတွင်ပြသထားသည့်အတိုင်း ကန့်သတ်ထုတ်ဝေထားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဝတ်အစား။
ဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့် ဖက်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ ပေါင်းစပ်မှုသည် သင်ဆန္ဒရှိသည့်ပုံသဏ္ဍာန်၏ကိုယ်ပွားများဖြစ်သည့် ဖက်ရှင်လုပ်ငန်း၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွန်သွားမည့် တီထွင်ဖန်တီးမှုများအတွက် အကန့်အသတ်မဲ့အခွင့်အရေးများကို ပေးဆောင်ပေးပါသည်။
လည်း Dolce နှင့် Gabbana အောက်တိုဘာလတွင် ၎င်းသည် NFT အဝတ်အစား ပစ္စည်းကိုးခုပါ၀င်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်စုဆောင်းမှုတစ်ခုကို "ကမ္ဘာဦးစုဆောင်းခြင်း" ဟုခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $ 5,7 သန်းဖြင့်ရောင်းချခဲ့ပြီး၊ စုဆောင်းမှုသည်ယနေ့အထိစျေးအကြီးဆုံးဒစ်ဂျစ်တယ်စုဆောင်းမှုဖြစ်လာသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဖက်ရှင်လောကတွင် တိုးများလာနေသော ဇာတ်ဆောင်များဖြစ်သည့် အချက်နှစ်ချက်ကို အာရုံစိုက်ကာ အသွင်အပြင်ကိုကျော်လွန်၍ "ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖက်ရှင်" ကို ချဲ့ထွင်ရန် တွေးတောသူများလည်း ရှိပါသည်။ ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့်နည်းပညာ.
ရှေ့ဆောင် Dutch ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ် "The Fabricant" ၏တွဲဖက်တည်ထောင်သူ Jae Slooten မှ လက်တွေ့ကမ္ဘာဖက်ရှင်သည် ဒုတိယအရေပြားကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သော ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောပစ္စည်းများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကို စောင့်ကြည့်နိုင်သည့် အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ့ဖက်ရှင်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း စောဒကတက်သည်။
"အနာဂတ်သည် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ကြီးထွားနိုင်သည် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်၌ပင် ကြီးထွားနိုင်သည့်အရာများတွင် ရှိနေသည်ဟု ကျွန်ုပ်ခံစားရသည်"Slooten က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောကသည် လူများအား "ကျွန်ုပ်တို့မည်သူဖြစ်သည်ကို ပို၍သတိထား၍ ဖော်ပြနိုင်သည်" ဟု ထပ်လောင်းရှင်းပြခဲ့သည်။ မဟုတ်ပါက Slooten အရ၊ ဖော်ပြမှုအပိုင်းကို virtual reality သို့ ဘာသာပြန်ပါမည်။ "ပြီးတော့၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာထဲမှာ၊ ငါတို့ လုံးဝရူးသွားနိုင်တယ်။ ရေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ၀တ်စုံကို နေရာတိုင်း မီးရောင်တွေ ၀တ်ဆင်နိုင်ပြီး မင်းရဲ့ စိတ်ခံစားချက်အရ မင်းရဲ့ ချည်ထည်ကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်".
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင်၊ Slooten ၏ကုမ္ပဏီ Fabricant သည် သူမ၏ virtual ၀တ်စုံများကို $9.500 ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချခဲ့ရာ စံချိန်တင်ခဲ့သည်။
"ပိုင်ရှင်အသစ်က သူ့ Facebook နဲ့ Instagram မှာ ဝတ်ထားတာ", Slooten ကပြောပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ အသွင်အပြင်တွင် အမြင်အာရုံအတွေ့အကြုံကို အဓိကပေးဆောင်သည့် virtual world တွင်၊ တစ်ကိုယ်ရည်နှင့်လူမှုရေးဖော်ပြမှုအတွက် ကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့် ဖက်ရှင်၏အခန်းကဏ္ဍသည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှသာဖြစ်သည်။ စောင့်ဆိုင်းရန်သာ ကျန်ရှိတော့သည် မျက်နှာပြင် ၀တ်စုံ သင်အသစ်ဖြစ်လာသည်။ streetwear.
ယခင်ဆောင်းပါးမလှုံ့ဆော်သူတွေကို ဘယ်လို လှုံ့ဆော်မလဲ။
နောက်ဆောင်းပါးKaia Gerber နှင့် Jacob Elordi လမ်းခွဲခဲ့သည်။
KIKO Milano သည် Waze ကြောင့် စတိုးဆိုင်များသို့ လည်ပတ်မှု 307% တိုးလာပြီး တစ်လအတွင်း စားသုံးသူ 1 သန်းကျော်ရောက်ရှိ
EVA အသစ် Mina နှင့် Celentano အားဖြင့်လူသစ်
Psyche & seduction1861
ဒီဇင်ဘာလ 1, 2017
နိုဝင်ဘာ 12, 2017